इन्द्रेणीमा पुगेर कृष्ण कंडेल जस्तो भगवान भेटे भन्दै रोइन टिकटककि भाइरल अस्मिता,चौका दाउका गायक पुरा गरिदिए अस्मिताको सपना ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…. – SUDUR MEDIA
April 4, 2021 April 4, 2021 AdminLeaveaComment on इन्द्रेणीमा पुगेर कृष्ण कंडेल जस्तो भगवान भेटे भन्दै रोइन टिकटककि भाइरल अस्मिता,चौका दाउका गायक पुरा गरिदिए अस्मिताको सपना ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
पछिल्लो समय केहि दिन देखि टिकटकबाट सबैको मन जितेकी राष्ट्रिय महिला खेलाडी अस्मिता रनपालको सपना पुरा भएको छ । उनले चौका दाउ गीतमा टिकटक बनाएर सबैतिर छाएकी थिइन । अहिले उनको खोजि निकै छ । स्याङ्जाबाट काठमान्डौ आएकी अस्मिता रनपाल अहिले निकै खुसि छिन कारण उनि इन्द्रेणी आएर ।
इन्द्रेणी सबैको मन्दिर हो इन्द्रेणीमा सबैको भेट हुने गर्छ जुन ठाउँमा जान पाए मात्रै पनि खुसि मिल्छ भन्छन सबैले सोहि कारण होला अहिले इन्द्रेणीमा जाने चाहना पुरा भएको छ अस्मिताको । उनि यो बेला सबैतिर भाइरल भएकी छिन । उनि निकै राम्रो नाच्ने भएकै कारण आम दर्शकले उनि प्रति धेरै माया दर्साउने गर्दछन ।
उनि रहेको गीत चौका दाउले करोड भियोर्स पाउदै गर्दा गीतका गायक बाबु कृष्ण परियार पनि उनि सहित मिडियामा आएका हुन् । छोटो अवधिमै गीत करोडमा पुगेको हो सोहि कारण पनि उनि प्रति दर्शकले सर्बाधिक माया दर्शाएका छन भने अस्मिताले पनि आफु हिट भएकै सोहि गीतको कारण बताएकी छिन ।